Izandiso – Windows – Vessoft
Lokhu kuyisevisi encane ehlinzeka ngokuvikelwa ekufakweni kwesofthiwe engadingeki njengezithuluzi ezihlukene zamathuluzi, i-adware noma i-spyware.
Lena isofthiwe yokuvala noma ukuvula izinkinobho ezicacisiwe noma izinqamuleli zekhibhodi. Isofthiwe ingakhubaza i-"Ctrl", "Alt", "Shift", "Windows" nezinye izihluthulelo.
Ama-Autoruns – ithuluzi lokulawula ukulayisha okuzenzakalelayo kwezinhlelo zokusebenza, izinsiza kanye nezinto. Isoftware ikuvumela ukuthi ulungiselele ukuqala okuzenzakalelayo kwama-akhawunti amaningi.